Nine-awned grass - ​Ingca​ - Mzantsi Afrika
Ingumnqatha onobuhle onokuthi uvele kwiindawo ezinomda kwiindawo ezisemaphandleni, ngokukodwa emva kokusalela komlambo kunye/okanye ukugqithisa. Lengca engamatshini ayisithoba ngumvulindlela onobulumko onokukhawuleza ukukhupha kunye nokukhusela izityalo eziphazamisayo. Amaqabunga kunye neepompo zihlanganiswe ngeenwele ezininzi, ezinobumnandi. I-inflorescence yinto eninzi, eneqhwa ekhokelela kwindawo ebukhali, evulekileyo okanye enesivumelwano. Iingcingo zineqhwaba.
Lengca idla ngokukhula kwiindawo eziphazamisayo. Ikwafumaneka kwakhona ezindleleni zendlela. Ikhula ngokubanzi kumhlaba onesihlabathi kunye kwaye iqhelekile kwiindawo ze-mopaneveld kunye ne-limestone.
Usuka kuDecember - uyotsho kuMeyi
Notshaba enotyiweyo ifumaneka ngase Sahari, ukusuka eSudan ngasentla ukuya eMzantsi Afrika. Iyona nto inobungqina bobuncwane ekukhuseleni ukuguguleka komhlaba kwiindawo ezininzi zelizwekazi-sikwazi ukukhula ngokukhawuleza kumhlaba ophazamisekileyo kunye nobonakaliswe, ngakumbi emva kwesomiso okanye ukugqithisa.